သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ လူတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် (၂)ကား - For her Myanmar
ဘယ်လိုကြောင့် ဒီအဖြစ်တွေ ကြုံရတာပါလိမ့်…
သတ္တဝါတွေ မွေးဖွားလာစမှာ ငယ်ရွယ်ကြတယ်၊ နုပျိုကြတယ်၊ နောက် တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာကြတယ်၊ အသက်အရွယ်ရလာမယ်၊ တဖြည်းဖြည်း အိုမင်းလာကြမယ်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ သတ္တဝါအားလုံးသွားရာလမ်းဖြစ်တဲ့ သေဆုံးခြင်းကို မလွဲမသွေခံစားကြရမယ်။ ဒါတွေဟာ မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို သဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးတွေကနေ ခြွင်းချက်ရယ်လို့ ချန်လှပ်ခြင်းကို ခံထားရသူတွေများ ရှိလေမလား ?
လက်တွေ့လောကမှာ ရှိနိုင်၊ မရှိနိုင် မသေချာပေမဲ့ စိတ်ကူးယဉ်လောကထဲက သဘာဝတရားရဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ရရှိထားသူတွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကား (၂)ကား အကြောင်းကို ယောင်းတို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ပထမရုပ်ရှင်ကားအမည်က The Curious Case of Benjamin Button ပါတဲ့…
Benjamin ဟာ သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အမွေခံသားဖြစ်ပေမဲ့ ဖခင်ရဲ့ ရက်စက်စွာစွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံထားရသူပါ။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူခံစားနေရတဲ့ ရှားပါးတဲ့ ရောဂါကြောင့်ပါ ယောင်းတို့ရေ…
သူ့ရောဂါကြောင့် သူဟာ အိုမင်းရွတ်တွနေတဲ့ အဘိုးအိုကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးဖွားလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတိုင်း သူဟာ တစ်နှစ်စာ ငယ်ရွယ်လာပါတယ်။ လူတွေဟာ ငယ်ရာကနေ ကြီးလာကြပေမဲ့ သူကတော့ ကြီးရာကနေ ငယ် လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့တာပေါ့….
ဒီလို ရှားပါးလူသားဖြစ်တဲ့ Benjamin ဟာ ဘဝမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေနဲ့ ရှင်သန်ရမှာလဲ ?
သူနဲ့ သာမန် မိန်းကလေးတစ်ယောက် သံယောဇဉ် ငြိတွယ်လာတဲ့အခါမှာရော သူတို့ ဘယ်လို တားဆီးမှုတွေကြုံရမှာလဲ ?
ဒီဇာတ်လမ်းကနေ လူသားတွေအတွက် ဘယ်လို သင်ခန်းစာတွေရနိုင်မလဲ?
ဆိုတာတွေကိုတော့The Curious Case of Benjamin Button ရုပ်ရှင်မှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့ ယောင်းရေ..
Related Article >>> LDRS တွေ ချစ်သူကိုအလွမ်းဖြေရင်း ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်(၃)ကား
ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကတော့ The Age of Adaline ပါ။
လူတွေကို ထာဝရနုပျိုလှပနေပြီး အိုမင်းမလာတဲ့၊ မသေနိုင်တော့တဲ့ ဘဝမျိုးရချင်လားလို့ မေးကြည့်ရင် ရချင်ပါတယ်လို့ မဆိုင်းမတွဖြေတဲ့သူများပါလိမ့်မယ်။
Adaline ဟာ ဒီလို လူသားတိုင်းလိုချင်တဲ့ ဘဝမျိုးရထားသူလေးပါ။
Adaline ဟာ နဂိုကတော့ သာမန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ တစ်ရက်မှာတော့ Adaline တစ်ယောက် ကား မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး မြစ်ထဲကို ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ မြစ်ရေထဲမှာ မိုးကြိုးထိမှန်ခံရပြီးနောက်မှာတော့ ထူးခြားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်…
သိပ္ပံသဘောတရား တစ်ခုကြောင့် (ဇာတ်ကားထဲမှာ သေချာရှင်းပြထားလို့ အတိအကျ ပြောတော့ဘူးနော် 😛 ) Adeleline ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေရပ်တန့်သွားပြီး အရွယ်ကြီးရင့်မှုလည်းတန့်သွားပါတော့တယ်။
ဒါကို Adaline ချက်ခြင်းသတိမထားမိသေးပါဘူး။ သူ မွေးဖွားထားတဲ့ သမီးအရွယ်ရောက်လာလို့ အမေ နဲ့ သမီး တစ်ရွယ်တည်းဖြစ်နေတာတောင် သာမန်နုပျိုတာလို့ပဲ ထင်နေပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မူမမှန်မှုကို သူကိုယ်တိုင်သတိထားမိလာရပါတယ်။ အချိန်တွေအများကြီးဖြတ်သန်းလာရပြီး သမီးဖြစ်သူ အိုစာလာတဲ့အချိန်ထိ Adaline က နုပျိုနေဆဲဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဘယ်တော့မှ မအိုမင်းဘဲ၊ မသေဆုံးနိုင်ဘဲ နေရတဲ့ဘဝဟာ ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပဲလို့ လူအများကထင်ကြပါတယ်။ တကယ်ပျော်စရာကောင်းပါ့မလားဆိုတာကိုတော့….
The Age of Adaline မှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်…
ဒီလို ထူးခြားလူသားတွေအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရတာ ဖျော်ဖြေမှုလည်းရသလို၊ ဘဝ သင်ခန်းစာတွေလည်း ရနိုင်မှာပါ ယောင်းရေ..
ကဲ.. ခုပဲ ကြည့်လိုက်တော့လေ…
ဘယျလိုကွောငျ့ ဒီအဖွဈတှေ ကွုံရတာပါလိမျ့…
သတ်တဝါတှေ မှေးဖှားလာစမှာ ငယျရှယျကွတယျ၊ နုပြိုကွတယျ၊ နောကျ တဖွညျးဖွညျးကွီးပွငျးလာကွတယျ၊ အသကျအရှယျရလာမယျ၊ တဖွညျးဖွညျး အိုမငျးလာကွမယျ၊ နောကျဆုံးမှာတော့ သတ်တဝါအားလုံးသှားရာလမျးဖွဈတဲ့ သဆေုံးခွငျးကို မလှဲမသှခေံစားကွရမယျ။ ဒါတှဟော မရှောငျလှဲနိုငျတဲ့ သဘာဝဖွဈစဉျကွီးတဈရပျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို သဘာဝဖွဈစဉျကွီးတှကေနေ ခွှငျးခကျြရယျလို့ ခနျြလှပျခွငျးကို ခံထားရသူတှမြေား ရှိလမေလား ?
လကျတှလေ့ောကမှာ ရှိနိုငျ၊ မရှိနိုငျ မသခြောပမေဲ့ စိတျကူးယဉျလောကထဲက သဘာဝတရားရဲ့ လကျဆောငျတှကေို ရရှိထားသူတှအေကွောငျး ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကား (၂)ကား အကွောငျးကို ယောငျးတို့နဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။
ပထမရုပျရှငျကားအမညျက The Curious Case of Benjamin Button ပါတဲ့…
Benjamin ဟာ သူဋ်ဌေးကွီးတဈယောကျရဲ့ အမှခေံသားဖွဈပမေဲ့ ဖခငျရဲ့ ရကျစကျစှာစှနျ့ပဈခွငျးကို ခံထားရသူပါ။ အကွောငျးရငျးကတော့ သူခံစားနရေတဲ့ ရှားပါးတဲ့ ရောဂါကွောငျ့ပါ ယောငျးတို့ရေ…
သူ့ရောဂါကွောငျ့ သူဟာ အိုမငျးရှတျတှနတေဲ့ အဘိုးအိုကွီးတဈယောကျအနနေဲ့ မှေးဖှားလာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသကျတဈနှဈကွီးလာတိုငျး သူဟာ တဈနှဈစာ ငယျရှယျလာပါတယျ။ လူတှဟော ငယျရာကနေ ကွီးလာကွပမေဲ့ သူကတော့ ကွီးရာကနေ ငယျ လာသူတဈယောကျဖွဈလာတော့တာပေါ့….
ဒီလို ရှားပါးလူသားဖွဈတဲ့ Benjamin ဟာ ဘဝမှာ ဘယျလို အခကျအခဲတှနေဲ့ ရှငျသနျရမှာလဲ ?
သူနဲ့ သာမနျ မိနျးကလေးတဈယောကျ သံယောဇဉျ ငွိတှယျလာတဲ့အခါမှာရော သူတို့ ဘယျလို တားဆီးမှုတှကွေုံရမှာလဲ ?
ဒီဇာတျလမျးကနေ လူသားတှအေတှကျ ဘယျလို သငျခနျးစာတှရေနိုငျမလဲ?
ဆိုတာတှကေိုတော့The Curious Case of Benjamin Button ရုပျရှငျမှာပဲ ကွညျ့လိုကျပါတော့ ယောငျးရေ..
Related Article >>> LDRS တှေ ခဈြသူကိုအလှမျးဖွရေငျး ကွညျ့သငျ့တဲ့ ရုပျရှငျ(၃)ကား
ဒုတိယမွောကျရုပျရှငျကတော့ The Age of Adaline ပါ။
လူတှကေို ထာဝရနုပြိုလှပနပွေီး အိုမငျးမလာတဲ့၊ မသနေိုငျတော့တဲ့ ဘဝမြိုးရခငျြလားလို့ မေးကွညျ့ရငျ ရခငျြပါတယျလို့ မဆိုငျးမတှဖွတေဲ့သူမြားပါလိမျ့မယျ။
Adaline ဟာ ဒီလို လူသားတိုငျးလိုခငျြတဲ့ ဘဝမြိုးရထားသူလေးပါ။
Adaline ဟာ နဂိုကတော့ သာမနျအမြိုးသမီးတဈယောကျပါပဲ။ တဈရကျမှာတော့ Adaline တဈယောကျ ကား မတျောတဆမှုဖွဈပွီး မွဈထဲကို ပွုတျကသြှားပါတော့တယျ။ မွဈရထေဲမှာ မိုးကွိုးထိမှနျခံရပွီးနောကျမှာတော့ ထူးခွားခကျြတှေ ဖွဈပျေါလာပါတော့တယျ…
သိပ်ပံသဘောတရား တဈခုကွောငျ့ (ဇာတျကားထဲမှာ သခြောရှငျးပွထားလို့ အတိအကြ ပွောတော့ဘူးနျော 😛 ) Adeleline ရဲ့ ဇီဝဖွဈစဉျတှရေပျတနျ့သှားပွီး အရှယျကွီးရငျ့မှုလညျးတနျ့သှားပါတော့တယျ။
ဒါကို Adaline ခကျြခွငျးသတိမထားမိသေးပါဘူး။ သူ မှေးဖှားထားတဲ့ သမီးအရှယျရောကျလာလို့ အမေ နဲ့ သမီး တဈရှယျတညျးဖွဈနတောတောငျ သာမနျနုပြိုတာလို့ပဲ ထငျနပေါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ သူ့ခန်ဓာကိုယျရဲ့ မူမမှနျမှုကို သူကိုယျတိုငျသတိထားမိလာရပါတယျ။ အခြိနျတှအေမြားကွီးဖွတျသနျးလာရပွီး သမီးဖွဈသူ အိုစာလာတဲ့အခြိနျထိ Adaline က နုပြိုနဆေဲဖွဈလာပါတော့တယျ။
ဘယျတော့မှ မအိုမငျးဘဲ၊ မသဆေုံးနိုငျဘဲ နရေတဲ့ဘဝဟာ ပြျောဖို့ကောငျးမှာပဲလို့ လူအမြားကထငျကွပါတယျ။ တကယျပြျောစရာကောငျးပါ့မလားဆိုတာကိုတော့….
The Age of Adaline မှာပဲ ကွညျ့လိုကျပါတော့နျော…
ဒီလို ထူးခွားလူသားတှအေကွောငျးရိုကျထားတဲ့ရုပျရှငျတှကေို ကွညျ့ရတာ ဖြျောဖွမှေုလညျးရသလို၊ ဘဝ သငျခနျးစာတှလေညျး ရနိုငျမှာပါ ယောငျးရေ..
ကဲ.. ခုပဲ ကွညျ့လိုကျတော့လေ…
Tags: Movie, nature, paranormal, review, special, supernova
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင် မဖြစ်မနေ လုပ်ထားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြင်ဆင်မှုများ
Sugar Cane April 24, 2019
နိပွန်မြေသို့ အလည်တစ်ခေါက် (အပိုင်း -၂)
Aye Mon Kyaw April 30, 2019
နိပွန်မြေသို့ အလည်တစ်ခေါက် (အပိုင်း -၁)
Aye Mon Kyaw April 26, 2019